खुला पत्र : सक्ने भए समाजिक सद्भाव सपार्नोस् - Ratopati
खुला पत्र : सक्ने भए समाजिक सद्भाव सपार्नोस्
बुधबार रातोपाटीको विचार र दृष्टिकोणमा प्रकाशित विजय ज्ञवालीको लेख ‘मधेसमा मडारिन थालेको कालो बादल’ पढ्न पाइयो । सराहना छ उहाँलाई, भोलिका दिनमा पनि यस्तै विचारहरूको प्रस्तुत उहाँको हातबाट भइरहोस् । जसले सय दिनमा निर्माण हुने समाजिक सद्भाव यस्ता विचारले एक छिनमै बिगार्ने छन् । बन्दुकको गोलीको रूपमा काम गर्नेछ र वारपारको बाटोलाई क्लियर गर्ने छन् । लेखक विजयजीले त्यही सोचेर यो लेख प्रदर्शन गर्नुभएको छ । सुरूमा पढ्दा जेनतेन ठीकै थियो । तर गहिरिएर पढ्दै जाँदा रङ्गभेदको भूत सवार भएको भेटिन्छ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुरुवात भएको छ । लोकतान्त्रिक अराजकता पनि सतहमा छताछुल्ल देखिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार जसलाई नि छ, मधेसीबाहेक । तर, कुरा राख्ने नाममा पहाडी शासकले मधेसमा जन्माएको डा. सीके राउत अर्को सद्भाव बिगार्ने गरी पहाडमा पनि सिके जन्माउने कुरा गर्नु हुँदैन । त्यो छुट मधेसीलाई मात्र होइन, पहाडीलाई पनि छैन । राज्यको बागडोर हातमा आउँदैमा मनपरि राज्य अधिकार दुरूपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । जुन भइरहेको छ, दुई तिहाइ बहुमत र अध्यादेशको नाममा । हातबाट सत्ता गुमेका लम्पसारहरू अहिले विभिन्न षड्यन्त्रमा लागेका छन् । मधेस आन्दोलनलाई गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । मधेसी जनताको बलिदान माथि खेलवाड गरिरहेका छन् ।
साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउमा लाग्ने केही गलत तत्वहरू मधेसी अनुहारले गरेको मधेस आन्दोलन बेठीक थियो भनिरहेका छन् । उपलब्धिभन्दा क्षति मात्र देखिरहेका छन् । त्यसो भए पहाडी शासकहरूले २००७ सालदेखि गरेको सङ्घर्ष ठीक र गणतन्त्र र सङ्घीयताका लागि मधेसी जनताले गरेको सङ्घर्ष र बलिदान बेठीक देख्ने र हेप्नेहरूले राज्य लुटिरहेका छन् । समाजिक अन्तर्विरोधमा आफ्नो सत्ताको आयु बढाइरहेका छन् । त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक जीवन देखिरहेका छन् । तर आमूल परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू समाजिक अन्तरविर्रोधमा आमूल परिवर्तन चाहन्छ र त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखिरहेका छन् ।
लेखक महोदय, मधेसीसँग सत्ता र सरकार छैन । उनीहरुसँग जनताबाट असुलेको कर प्रयोग गरेर बन्दुक र गोली किनेर जनता मार्ने सेना र प्रहरी पनि छैन । सिक्किम, दार्जिलिङ र कोशी–कर्णाली बेच्ने र भारतीय दलाली गरेर नेपालको शासक बन्ने अधिकार छैन । अब सङ्घीय गणराज्यमा पाउने अधिकारमाथि पनि नश्लवादी शासकहरूले योजनाबद्ध षड्यन्त्रमा लागेका छन् । तपाईंकै शब्दमा भन्नुपर्दा जोसँग राज्यको सारा बागडोर छ । प्रहरी प्रशासनको बलमा बन्दुक चलाएर जनता मार्ने अधिकार छ, त्यसलाई जनताको घरेलु हतियार, आगजनी र बिहारी गुन्डा गर्दी शैलीबाट केको डर ? त्यो शैलीको जन्म र अधिकार कसले दियो ? त्यही कर्मकाण्डबाट हजारौँ मधेसी–पहाडीको कोख र सिउँदो रित्याएर आएकाहरू अहिले सतारसरकारको मनपर्दी मजा लुटिरहेका छन् ।
महोदय, मधेसमा कालो बादल मडारिएको होइन, नेपालमै कालो बादल मडारिएको छ । कालो बादल मडारिएको आज होइन दसकौँदेखि मडारिएको छ । जबसम्म मधेसीले मात्र होइन पहाडका बहुसङ्ख्यक आदिवासी, जनजाति, दलितलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदाय स्वतन्त्र रूपमा आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकार सङ्घीय राज्य र प्रदेशमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कालो बादल मडारिरहने छ । त्यसैले समूहिक अधिकारविरूद्ध अझै पनि देशमा मुठीभरका नश्लवादी खस पहाडी अहंकारवादका कालो बादल मडारिरहेका छन् । उत्पीडनमा परेका मधेस र पहाडका बहुसङ्ख्यक जनतालाई सताइरहेका छन् । पहाडी मधेसी बीचको साम्प्रदायिक नारा दिएर छोटे राजाहरू आफ्नो आयु लमब्याउने राजनीतिक फोहोरी खेलमा लागेका छन् ।
महोदय, नेपालमा तपाईं जस्ता ७ जना विश्लेषक जन्मिए भने सातवटा सङ्घीय प्रदेश सात देशमा परिणत हुन्छन् । परिवारमा सँगै मिलेर बस्नेहरू पनि डिभोर्सको जीवनलाई आनन्द मन्छन् । किन भन्ने बाहुल्य तपाईंहरूको भन्दा आदिवासी, जनजाति, दलितलगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायको छ । त्यो समुदायले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले कलम चलाउँदा अलि समय सापेक्ष ध्यानमा राखेर कलम चलाउनु र सही सत्य विषयलाई बाहिर ल्याउनुस् । कहिलेकाही सत्य कुराले पनि घर विगार्छ । असत्यले त विगारेकै छन् । तपाईं त्यही असत्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको महसुस गरेँ ।
काठमाडौँबाट देखिने जनताका समस्या र आक्रोश जनताकै बीचमा गएर हेर्दा आकाश जमिनको फरक पाइन्छ । गाउँका जनताले चाहेको कुरा फरक छ । काठमाडौँ बसेर मधेसको बारेमा निर्माण गरिएका विचारच गलत छन् र मधेसका बारेमा त्यहाँबाट गलत व्याख्या भइरहेको छ । यस कार्यले समाजिक सद्भाव बिगारेको छ । विजयजीलाई मेरो प्रश्न छ सक्नुहुन्छ भने समप्रदायिक सद्भाव विगार्ने लेख लेख्ने प्रयास नगर्नुस र हजारौँको दिमाग नभुट्नुस । सक्नुहुन्छ भन्ने काठमाडौँको परजीवी काम छोडेर मधेस पहाडका गाउँबस्ती पस्नुस । हजारौँ वास्तविक लेखको साक्षी बन्ने अवसर पाउनु हुनेछ । जो वास्तविक गुमराहमा परेका छन् । त्यसैले समाजिक सद्भाव सपार्ने अभियानमा सहयोग गर्नुस् र एक जनालाई भए पनि सामाजिक सद्भावको बाटोमा डोर्याउनुस् ।
संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न दलहरू तयार हुनैपर्दछ
वैशाख १२, २०७२ : बिर्सनै नसकिने त्यो क्षण
लोकतन्त्रमा बढेको भ्रष्टाचार
यसरी हुनसक्छ तीव्र पुनर्निर्माण
मिलेर चुनावमा जाने कि पत्तासाफ हुने ?
नागरिकमा नैतिकताको आवश्यकता
शास्त्र र विज्ञानको सामाञ्जस्यता